ज्वाला संग्रौला भन्नुहुन्छ : कुलमानलाई पाखा लगाउने वि’रुद्ध आ’न्दोलन गरौँ, ग’द्दारहरुको सारा सम्पति ज’फत गरौँ…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
ज्वाला संग्रौला भन्नुहुन्छ : कुलमानलाई पाखा लगाउने वि’रुद्ध आ’न्दोलन गरौँ, ग’द्दारहरुको सारा सम्पति ज’फत गरौँ…हेर्नुहोस् ।
September 14, 2020 253
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पदा’वधि आज सकिँदै छ । घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिक’रणको कार्यकारी पदमा नियुक्त भएका थिए । उनको चारवर्षे कार्य’काल आज पूरा हुँदै छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई पुनः नियुक्त नगरे प्राधि’करणमा उनको कार्य’कारी भू’मिकाको यात्रा सकिनेछ । प्राधिकरणमा नियुक्त भएकै वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन काठमाडौं उपत्यकामा लोड’सेडिङ हुन नदिएपछि उनको च’र्चा चुलिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः देशैभर लोडसे’डिङ अन्त्य गर्न भू’मिका खेलेका थिए ।
तत्का’लीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले घिसिङलाई चिलिमे जल’विद्युत् कम्पनीको प्रब’न्ध स’ञ्चालक हुँदा काम सन्तो’षजनक नभएको भन्दै प्राधिकरण केन्द्री’य कार्यालयमा तानेकी थिइन् । त्यसपछि ऊर्जामन्त्री बनेको जनार्दन शर्माले घिसिङलाई कार्य’कारी प्रमुखमा नि’युक्त गर्न प्रस्ता’व गरेको थिए ।
मन्त्रि’परिषद् पुगिसकेको छैन दोहो¥र्‍याउने प्रस्ता’व
घिसिङको पदा’वधि आज सकिने भए पनि उनलाई दोहोर्‍’याउने विषयमा ऊ’र्जा मन्त्रालयले मन्त्रि’परिषद्‌मा प्रस्ताव पु¥र्‍याइसकेको छैन । मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रस्ता’व भने गरिसकेको छैन् । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी नसकेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरिसकेको भए पनि लामो समयसम्म उक्त प’द खाली भने नराख्‍ने उनले बताए ।
प्र’स्ताव गएको छैन भने घिसिङको का’र्यकाल आज सकिने भयो है ? भन्ने प्रश्नमा सचिव घिमिरेले भने, “आज नियुक्त नभएर फरक पर्छ के ? आज वा भोलि पनि प्रस्ताव जान सक्छ । आजै गएर निरन्तर हुनुपर्ने भन्‍ने त छैन नि,” उनले भने । तर उनले कार्य’कारीजस्तो पदलाई धेरै समय खाली नराख्‍ने भने बताए । “कार्य’कारी जस्तो पदलाई लामो समय खाली राख्दैनौं । चाँडो पू’र्ति गर्ने हो ।” प्राधि’करणका कर्मचा’रीहरुले उनको बि’दाइमा का’र्यक्रम गर्दैछन् ।
घिसिङको कार्य’काल थप्ने विषयमा सरकार ग’म्भीर नभएको प्रति सर्व’त्र आलो’चना भएको छ। सर्वसा’धारण देखि कलाकार र राजिनितीक नेताहरु सम्म कुलमानको का’र्यकाल थप्नु पर्ने बताइरहेका छन्। तर, पनि सरकारले जन-आवाज सुन्ने प्रयत्न गरेको छैन। कुलमानको कार्यका’ल नथपिए आ’न्दोलन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्।
यसै बीच सामाजिक अभियानता ज्वाला संग्रौलाले कुलमानको पक्षमा सडक आन्दो’लनको वि’कल्प नभएको बताएकी छन्। उज्यालो नेपालका अभियन्ता कुलमान घिसिङलाई अन्तत: भ्र’स्टहरुले पाखा लगाउने नै ष’ड्यन्त्र रचि’सकेको हुँदा आन्दो”लनको वि’कल्प नभएको उनको भनाई छ।
“उज्यालो नेपालका अभि’यन्ता कुलमान घिसिङलाई अन्तत: भ्रस्ट’हरुले पाखा लगाउने नै ष’ड्यन्त्र रचि”सकेछन् ! अब ससक्त सडक आन्दो’लनको तयारी गर्नु पर्छ ! अनि कुलमानलाई ह’टाउन लबि’ङ गर्ने रास्ट्र’घाती ग’द्दारहरुको सारा सम्पति जफत गरेर भोका जनतालाई बाँड्नु पर्छ। enough is enough 👊”,फेसबुकमा उनी लेख्छिन्। खबरमान्डु बाट
Prevकासी जेट्ली भन्नुहुन्छ : सफल काम गर्दा पनि किन ओली सरकारको आँखामा पर्दैनन कुलमान घिसिङ ?
Nextविद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङ नै नियुक्त हुने…हेर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न जसपा नेपालका नेताहरु बालुवाटारमा
प्रचण्ड र माधव नेपालको निष्कर्ष – ओलीले पार्टी फुटाईसके…हेर्नुहोस!
प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको प्रश्न : भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कसले रोकेको हो त ?